सुरुमा मेरै सरले इज्जत लुटे, अनी अरू मान्छेपनि ल्याउन थाले ! – Dainik Sangalo
सुरुमा मेरै सरले इज्जत लुटे, अनी अरू मान्छेपनि ल्याउन थाले !
October 19, 2020 234
बैतडी – गत मंसिरको कुरा हो । त्यो दिन आमा घास लिन जानुभएको थियो। बा काम गर्न स्वर (पिथौरागढ,भारत) गएका थिए । भर्खरै मन्दिरबाट फर्केर घरमा एक्लै बसिरहेको बेला खडक सर आए । जसले मलाई एक कक्षादेखि आठ कक्षासम्म पढाएका थिए । मैले तल्लो घरमा जाने तयारी गर्दैगर्दा उनले मलाई च्या’प्प समाते ।
वरपर कोही मानिस थिएनन् । मेरो मुख बन्द गरेर उनले लुगा फु’का’ल्न थाले । म केही बोल्न सकिन् । अप्रत्यासित रुपमा यसो भइरहँदा जोर जोरले चि’च्या’उन खोजेकी थिए । तर मुख बन्द थियो । आवाज नै निस्केन् । ज’बरज’स्ती गरेर उनि फर्किए । म एकछिन बे’हो’स’जस्तै भए । उठ्नै सकिन । निकै पी’डा भइरहेको थियो । साँझ आमा घरमा आउनुभयो तर दिउँसोको कुरा भन्ने आँट नै आएन् ।
कसैले थाहा पाए भने आफ्नै इज्जत जान्छ भन्ने डर थियो । राम र खडकले पनि कसैले भन्यो भने बदनाम गरिदिन्छौ भन्थे ।
त्यसपछि खडक सरले अर्का राम सरलाई त्यो कुरा भनेछन् । अर्को त्यस्तै हर्कत राम सरले गरे । यि दुई जनाले म माथि ज’ब’र’जस्ती गरे । कुनै दिन खडक, कुनै दिन राम विद्यालयबाट फर्किदा सँगै सँगै आउथे र मौका मिल्ने बित्तिकै क’र’णी गर्थे । गाउँमा पनि यी दुई जना मुख्खेराठ हुन् ।
गाउँ भन्दा बाहिर कही गएकी छैन् । के गर्नेुपर्ने हो त्यो पनि थाहा छैन् । मनमा त लागिरहेको छ कि आज म माथि त्यस्तो गर्नेहरुले भोली अरुलाई पनि नगर्लान र ?
मलाई पनि त्यही ठिक लागेको थियो । तर गाउँका जान्नेसुन्ने तथा वडा र गाउँपालिकाका सबै मान्छेले मिलाउँछौ भनेका छन् । जसले जे भनेपनि म माथि ज’ब’र’जस्ती गरेर यो अवस्थामा पुयाउनेहरुलाई स जाय होस भन्ने चाहना त छ ।
समाजको पनि घृ/णाको पात्र भएकी छु । कसैले फोनमा सोध्यो भने ठिकै छ, केही गाह्रो छैन भन्नु भनेका छन् ।
मेरो गल्ती त केही थिएन् । तर यतिबेला म’र्नुं न बाँ/च्नुको अवस्थामा पुगेकी छु । नाकमा आएको सिगान पुछेर कखरा सिकाउँदै आठ कक्षा सम्म पढाउने शिक्षकले त्यस्तो गर्लान भन्ने कल्पना समेत गरेकी थिइन् । त्यसपछि जसले जन्माए, हुर्काए उनले त केही गरिदेलान कि भन्ने थियो।
अहँ वास्ता नै गरेनन् । मेरो गल्ती यति थियो कि म माथि भएको अन्यायबारे समयमै भन्न सकिन । अहिले आमा बुवाको मात्रै होइन, समाजको पनि घृ/णाको पात्र भएकी छु । कसैले फोनमा सोध्यो भने ठिकै छ, केही गाह्रो छैन भन्नु भनेका छन् । गाउँका जान्ने बुझ्नेले नै यसो भन्नु भनेपछि अहिले सबैसँग फोनमा त्यही भन्दै आएकी छु । यस्तो अवस्थामा म के गरु ?
(महेन्द्रनगरपोष्टवाट साभार गरिएको यो समाचार बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा भएको हो)
Prevडीभी परेर पनि अमेरिका नगई देशको सेवा गर्न से’नामा भर्ती…हेर्नुहोस् ।(भिडियो हेर्नुहोस)
Nextदशैं लक्षित गर्दै आज देखि कात्तिक १५ गते सम्म कडा निषेधाज्ञा
९ महिनादेखि बन्द रहेको, सवारी लाइसेन्स खुलाउँने बारेमा सरकारले नि’काल्यो यस्तो जरुरी सूचना !
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विवाह गर्नै लाग्दा फेरी मिडियामा आइन बालिका, भन्छिन – ‘म संग लिभिङ टुगेदर अनि ववाह चाहि अर्कैसंग’ (भिडियो हेर्नुहोस)
पुरै गाउँलाई निशुल्क चुलो र सिलिन्डर वितरण गर्ने यी युवा.. लागि सम्मान को लागि शेयर गरौं, र उनको वास्तविक जीवनी पढौं
४ फिट लामो सर्प यि महिलाको पेटबाट निकालियो (भिडियो)
बैतडीमा कलेज हिँडेकी किशोरीको शव जंगलमा यस्तो अवस्थामा भेटियो, कसरी भयो उनको मृत्यु? (126130)
यस्ता थिए लाहुरे र स्मिताका रमाइला टिकटक जुन यादमै सिमित रहेदेशै रुवायो हेर्नुस भिडियो (96468)
दुबई का’ण्ड भन्दै यी युवतिको हेर्नै नसकिने ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस) (73498)
जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोला ! (68837)
बल्ल प्रहरीले २४ घन्टामै भागरती ह#त्या,रा​ प’त्ता लगायो।गाउकै मान्छे रहेछ (63938)
हेर्नुस्, नेपाली सेनाको यस्तो क:’ठोर….. ; जुन भिडियो अहिले संसारभरी भाइरल भइरहेको छ (भिडियो हेर्नुस) (54684)
दुखको खबर !! अनिताको अप्रेशन सफल हुन सकेन अब के होला ? बिनोद रुदै मिडियामा आए (49744)
समाचार युवा नेता रामकुमारी झाक्री घा’इ’ते युवाहरु आ’क्रो’शित ( हेर्नुहोस् भिडियो ) (43553)
भर्खरै हेर्नुस भा’गीरथीको ह,त्यारा लाई यस्तो अवस्थामा प्रह’री द्वारा के गरियो, भिडियो सहित (43412)
खुसिको खबर – सोच्नै नसकिने गरि ह्वात्तै बढ्यो वृद्धभत्ता !!! (41660)
कोरोनाबाट एकैदिन ८३ जनाको मृत्यु, ११२ संक्रमित थपिए
फागुन १४ गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल